सम्पादकीय : नाकामा सतर्कता – Yug Aahwan Daily
सम्पादकीय : नाकामा सतर्कता
युग संवाददाता । ३ चैत्र २०७६, सोमबार १२:२२ मा प्रकाशित
273 पटक हेरिएको
यतिबेला विस्व नै कोरोनाको त्रासमा छ । छिमेकी देश चीनबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस हाल विश्वका एक सयभन्दा धेरै देशमा फैलिएको छ । यसको संक्रमणबाट हालसम्म पाँच हजार नागरिकले ज्यान गुमाइ सकेका छन् ।
विभिन्न देशमा लाखौं यसको संक्रमणमा परेका छन् । कोरोनाको संक्रमणबाट विश्वलाई नै आतंकित बनाइ रहेका बेला नेपाल पनि यसको उच्च जोखिममा रहेका विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाइसकेको छ । चीनसँग सिमाना जोडिएका कारण पनि नेपाल जोखिममा छ । हालसम्म यसको संक्रमण नदेखिए पनि नेपालमा यसविरुद्ध लड्न पूर्व सतर्कता अपनाइएको छ ।
यद्यपी यसको प्रभावकारिताबारे अहिले पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । कर्णालीमा पनि सतर्कता अपनाइएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भित्रिन नदिन नाकाहरुमा चेकजाँच र कडाइ गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध हालसम्म पनि खोप र औषधि पत्ता लागेको छैन ।
यसकारण पनि यसको आतंक धेरै भएको हो । सामान्य रोगसँग पनि जुध्न नसक्ने कर्णालीमा कोरोना भित्रिएको खण्डमा अवस्था के होला ? यो अवस्था आउन नदिन पूर्व तयारी र सतर्कता नै उत्तम हुनेछ ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सतर्कता अपनाएको देखिन्छ । कोरोना भाइरस भित्रिन नदिन कर्णाली भित्रिने नाकाहरुमा कडाइ गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भित्रिने सबै नाकामा हेल्थडेस्क स्थापना गरेर कडाइ गर्न थालेको हो । हेल्थडेस्कमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले बाहिरबाट भित्रिने यात्रुको चेकजाँचमा कडाइ गरिरहेका छन् ।
मुख्य नाकाका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्दा कोरोना संक्रमित भएमा प्रदेशभित्र प्रवेश पाउँदैन । संक्रमित प्रदेशमा आउन नपाओस् अर्थात अरुलाई भाइरस संक्रमण हुन नदिने पहिलो उपाय भनेकै नाकामा चेकजाँच नै हो । यसकारण पनि प्रदेश सरकारले कर्णालीमा भित्रिने मुख्य नाकाहरुमा चेकजाँच गरेको छ । सबैभन्दा पहिला कोरोना फैलिएको चीनसँग सिमाना जोडिएको कर्णालीमा यो भाइरस भित्रिन नदिन प्रदेश सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो । चीन सँगका नाका र दक्षिणतर्फ रहेका सबै नाकामा कडाइ गरिएको छ ।
यसले केही हदसम्म कोरोना भित्रिन रोक्ने छ । तर प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्र कोरोनाको संक्रमण रोक्न सम्भव छैन । व्यक्तिगत प्रयास र सजगता पनि आवश्यक छ । व्यक्ति स्वयमले पनि सचेत भएको खण्डमा यसबाट जोगिन सकिन्छ । बाँच्न पाउने सबै नागरिकको अधिकार हो । तर कर्णालीमा बिरामीले औषधि र उपचार नपाउने समस्या छ । यसकारण पनि कोरोना जस्तो महामारीको उपचार कति प्रभावकारी होला ? त्यसकारण नाकाहरुमा हाल भइरहेको चेकजाँच र सतर्कताले कर्णालीमा कोरोना भित्रिन नदिन सहयोग पुग्नेछ ।
अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले पनि नाकामा स्थापना भएका हेल्थडेस्कमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आनाकानी गर्नुहुँदैन । सबैको साझा प्रयासले नै सफलता मिल्ने हो । यसका लागि सरकार, नीजि क्षेत्र र सर्वसाधारणहरुले सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । नाकाबाट भित्रिदा सहज रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गराएर मात्र भित्रिने हो भने कर्णालीमा कोरोनाको संक्रमण रोक्न सम्भव हुनेछ । यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सम्पादकीय : अक्सिजन उपलब्ध गराऊ
सम्पादकीय : विकासमा निरन्तरता
सम्पादकीय : संकटमा गासको जोहो
सम्पादकीय : सावधानी अपनाऔं